admintriatra, auteur sur - Page 1384 sur 1851
Lalaon’ny Frankôfônia : Hiandrandra medaly maro amin’ny kolontsaina i Madagasikara
20/07/2017 admintriatra 0
Hotanterahina any Abidjan, renivohitr’i Côte d’Ivoire manomboka rahampitso ka hatramin’ny 29 jolay izao ny lalaon’ny Frankôfônia, izay andraisan’ireo firenena mampiasa ampahany na manontolo ny teny frantsay. Andrasana anio any an-toerana ny fahatongavan’ ny Filoham-pirenena malagasy, …Tohiny
Fitaterana RN7 : Efa miverina amin’ny laoniny
Nivaha ny olana. Raha toa ka nikomy tsy mety hitatitra sy nanao ny asany andavanandro amin’ny asa fitateram-bahoaka ireo mpitatitra sy kaoperativa mampitohy an’Antananarivo amin’iny faritra Atsimo, amin’ny lalam-pirenena fahafito na RN7 iny, nisokatra ihany …Tohiny
Nohon’ny gaboraraka : Arahi-maso ny sekoly manofana “Paramédicaux”
Miroborobo izay tsy izy ny sekoly ambony tsy miankina manofana ny “paramedicaux” eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Arakaraka ny mahamaro azy ireo anefa no toa vao maika mampiseho lany ny gaboraraka ao anatin’ity seha-piofanana iray …Tohiny
Mpanafika tra-tehaka teny Tanjombato : Maty niharan’ny fitsaram-bahoaka
Lehilahy iray manodidina ny 30 taona no niharan’ny hatezeram-bahoaka ary namoy ny ainy vokatr’izany, omaly, tokony ho tamin’ny 02 ora sy sasany maraina, teny Ambaniatsimo Tanjombato, alohan’ny lalana hiakatra ho any Malaza. Goaka vokatry ny …Tohiny
« 1 … 1 382 1 383 1 384 1 385 1 386 … 1 851 »
Teraka ny 06 novambra 1958, tao Antsofinondry, Kaominina Sabotsy Namehana, ary nandalo ny fahazazana sy ny fahatanorana tao Antsofinkisoa. Mankalaza ny faha-59 taonany anio ny Filoham-pirenena Hery Martial Rajaonarimampianina. Zanak’olon-tsotra, ary manam-pahaizana manokana momba ny ...Tohiny